Fumanisa iimaski zeenwele ezi-6 zale ntwasahlobo | IBezzia
Susana Garcia | 29/04/2021 20:00 | Ubuhle, Unyango lobuhle
El ukhathalelo lweenwele sisiseko ekufuneka siyithathele ingqalelo mihla le. Ngalo lonke ixesha kufuneka usebenzise iimveliso ezilungileyo kodwa sinokusebenzisa iimaski ezinkulu zeenwele amaxesha ngamaxesha, kuba ngaloo ndlela siya kongeza ukhathalelo olongezelelekileyo kwiinwele zethu. Le ntwasahlobo sinokuba neenwele ezinamanzi kwaye ezintle, ezikhazimlayo nezisempilweni ukuba sisebenzisa iimaski ezilungele iinwele zethu.
Las iimaski zenwele ziya kwenza ukuba iinwele zakho ziphuculwe kwaye ngokukhetha izithako Kungoko sinokuthi siqwalasele ezona zilungele uhlobo lweenwele zethu. Iimaski zendalo esinokuthi sizenze ekhaya zilungile, kuba sisebenzisa izinto zendalo kwaye kwangaxeshanye sihoya iinwele ngezinto ezilula.
1 Isigqubuthelo seenwele ezinqabileyo
2 Imaski yeenwele ezomileyo
3 Isigqubuthelo seenwele esinamafutha
4 Imaski yeenwele ezintle
5 Isigqubuthelo seenwele esimdaka
6 Imaski yeenwele ezinemibala
Isigqubuthelo seenwele ezinqabileyo
El iinwele ezikhawulezayo zihlala zinengxaki yokoma, Ke eyona nto iphambili kule meko kukondla iinwele. I-avovoc ihlala isisixhobo esikhulu kweli tyala. Ke kufuneka sifumane iavokhado esele ivuthiwe esinokuthi siyigcobe kwiinwele zethu. Le avokhado ingadityaniswa ne-olive okanye ioyile ye-almond ethambisa kakhulu ukuphelisa i-frizz. Emva kokufaka imaski kufuneka sihlambe iinwele ngeshampu efanelekileyo kodwa siza kubona ukuba i-frizz iyanyamalala njani ukuba icocwe kakuhle.
Imaski yeenwele ezomileyo
Iinwele ezomileyo zinokuba njalo Zuza kwizithako ezibonelela ngamanzi amaninzi. Ioyile yekhokhonathi exutyiweyo kunye neqanda elimhlophe zilungile. Ioyile yekhokhonathi iyathambisa kwaye iqanda limhlophe lilula kodwa liyanceda ukugcina iinwele zifumile, ukuze ekugqibeleni iinwele zondliwe kwaye ziyeke ukoma.
Isigqubuthelo seenwele esinamafutha
Iimaski ezizenzele ekhaya zeenwele ezinamafutha zihlala soloko usebenzisa ijusi yelamuni, kuba inamandla amakhulu e-astringent. Ungayixuba ilamuni kunye neqanda elimhlophe, esisithako esikhanyayo esongeza ukukhanya. Kwinwele ezinamafutha asinakho ukusebenzisa izinto ezibonelela ngamanqatha amaninzi njengeoyile yomnquma, kodwa inokuxutywa neyogathi ehambisa amanzi kodwa ingenamafutha. Yenza imaski kwaye ushiye isiqingatha seyure. Izinwele kufuneka zihlanjwe rhoqo. Ilamuni iyanceda ukulawula imveliso ngokulula.
Imaski yeenwele ezintle
Las amaqunube sisithako esifanelekileyo seenwele ezingenamandla. Iimaski zeenwele ezintle kufuneka zibonelele ngamandla kunye nevolumu. Sebenzisa amaqunube anokutyunyuzwa ukwenza ipasta esongeza kuyo umgubo wombona. Ierberberries zongeza amandla kwizinwele kwaye umgubo wongeza ivolumu.
Isigqubuthelo seenwele esimdaka
El Iinwele ezimdaka zinokomisa kwaye zibenomkhuhlane, kuba yonke into inento yokwenza nefayibha enokonakala. Kubalulekile ukondla kunye nokuthambisa iinwele zakho ngeemveliso ezinceda ukuba zibonakale ngcono. Ukuze iinwele zikhanye kufuneka songeze izikhupha zamaqanda kwimaski. Iqanda linceda ukukhanya okukhulu kwifayibha yeenwele. Kwelinye icala, sinokuxuba i-yolk yeqanda kwi-yogurt, kuba iyogurt isondlo kakhulu kwizinwele kwaye iyanceda ukugcina i-hydration. Ukongeza, zizithako ezibini ezifumaneka ngokulula ekhitshini kwaye zixubeka ngokulula ukufaka kwiinwele.
Imaski yeenwele ezinemibala
Izinwele ezidayiweyo zinengxaki enkulu yokuba yomile kwaye ngamanye amaxesha yonakele. Inkqubo ye- ioyile yomnquma sisithako esikhulu kwaye izithako zendalo azithandi ukutsala umbala. Unokongeza ezinye izikhupha zamaqanda ukondla iinwele kwaye uzenze zibukeke ziqaqambile kwaye zigudile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Iimaski zeenwele ezi-6 zale ntwasahlobo